Jubbaland oo ku dhawaaqday ciqaabta ka dhalan karta hadii qaali laga dhigo badeecadaha iyadoo laga faaiideysanayo Coronavirus. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSomali NewsJubbaland oo ku dhawaaqday ciqaabta ka dhalan karta hadii qaali laga dhigo badeecadaha iyadoo laga faaiideysanayo Coronavirus.
Maamulka Jubbaland ayaa uga digay ganacsatada in qiimo sare ay iibiyaan Qalabka looga Gaashaanto Faafida Cudurka Caronavirus.
Jubbaland ayaa sheegtay aysan aqbali doonin in Ganacsatadda ay faa’iido ka raadinayan saameynta cudurkaasi.
Jubbaland waxa ay sheegtay in ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto Ganacsatada qaaliyeeyay Maceeshada si ay uga faa’idaystaan werwerka Cudurka Corona Virus awgii.
Waxa ay xustay in maamulka ay diyaar garow ugu jirto ka hor-tagga saameynta dhaqaale ee uu cudurka Caronavirus keeni karo, isaggoo Ganacsatada ugu baaqay inay waajib iska saaraan daryeelka Bulshadda.
Maalmihii lasoo dhaafay Magaalada Muqdisho waxaa sare u kacay qalabka la iska difaaco Cudurka Corona Virus ee Afka lagu xirto ka dib markii Kiiskii ugu horreeyay laga helay Soomaaliya.